‘सम्वृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’को लागि एमालेलाई जिताऔं - GBM
‘सम्वृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’को लागि एमालेलाई जिताऔं
२०७९ बैशाख २६ gautam buddha sandesh	0 Comments
नेकपा एमाले रुपन्देही जिल्लाका एक प्रभावशाली नेता हुन् नारायण प्रसाद भण्डारी । नेकपा एमाले सिद्धार्थनगर नगरकमिटिका सचिव भण्डारी एक प्रतिष्ठित सफल ब्यवसायी समेत हुन् । भण्डारीले भीम अस्पतालको अध्यक्ष भएर छोटो समयमा नै सबैको मन जित्न सफल भएका थिए । स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेबाट मेयर पदका प्रबल दाबेदार भण्डारी मेयरको टिकट नपाएपनि पार्टीका गतिबिधीका अत्यन्तै सक्रिय भएर लागेका छन् । अब सिद्धार्थनगरमा नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो छ ? पार्टी कसरी चुनावमा होमिएको छ ? प्रस्तुत छ भण्डारीसंग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
सिद्धार्थनगरमा चुनावी माहोल तातिरहेको छ । यहाँहरुको चुनावी वातावरण कस्तो छ ?
यो हाम्रो २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन माहोल खडा गर्नको लागि प्रत्येक वडामा घरदैलो कार्यक्रम प्रमुख उप–प्रमुख लगायत वडाका सबै प्रतिनिधीहरुलाइ लिएर घरदैलो अभियानमा छौं । घरदैलोकै क्रममा हामीले मुख्य रुपमा १३ वटै वडामा आजको दिनसम्ममा लगभग सम्पुर्ण घरदैलो सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब बाँकी रहेका केही छुटफुट घरदैलोमा जाने, जनताहरु लाइ भेट्ने, संघ संस्था तथा ब्यवसायीहरु संग भेटघाट कार्यक्रम गर्ने । हामी अहिले यही क्रममा नै छाँै ।
एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार लाई नै नगरवासीले किन मतदान गर्ने त ?
हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डा नै राष्ट्रलाई सम्वृद्ध बनाउने र ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’नारा सहित अगाडी बढीरहेको पार्टी हो । यो महान् लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने हाम्रो पार्टी जस्तो अरु कुनै पार्टीमा छैन् । अरु पार्टीहरुमा ५ दलीय गठबन्धन बनाउने, मिलेर भागवन्डा गर्ने र भागवन्डा बाट पद बाँडफाँड बाहेक सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि कार्ययोजना नभएको हुनाले र हाम्रो पार्टी चाहे राष्ट्रियताको सवालमा होस, चाहे राष्ट्रिय एजेन्डाको सवालमा होस्, हामी अरु पार्टी भन्दा भिन्दै छौँ । अर्को कुरा, २०७४ को निर्वाचनामा पनि अलग–अलग लडे पनि हामी अरु पार्टी भन्दा भारी मतले अगाडी थियौँ । हाम्रो पार्टी ने.क.पा.को निरन्तरतामा एमाले रहेको छ । त्यसमा हाम्रो महत्वहरु बढिरहेका छन् । यतातिर हाम्रो नयाप्रवेशीहरु उद्योगी ब्यवसायी र संस्थाहरु बाट ५०० थप ब्यक्तिहरुलाइ पार्टी प्रवेश गराएका छौं । र हाम्रो पार्टीले अहिल्लो प्रमुख र उप–प्रमुख जित्दा यहाँ धेरै राम्रो कामहरु भएको छ । हामी ५ वर्ष अगाडी र अहिले कस्तो भैरहवा छ भन्नेकुरा जनताहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ । यो विकास लाइ निरन्तरता दिनपनि हाम्रो नेकपा एमालेले अगाडि सारेका मेयरका उम्मद्वार डा. रामप्रसाद बस्याल र उप–मेयरका जुधारु महिला नेतृ उम्मेद्वार उमा अधिकारी लगायत सम्पुर्ण वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई भारी मतका साथ विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छाँै ।
परिवर्तनका एजेन्डाहरु केके हुन्, ताकी सूर्यमै मतदान गर्ने ?
हाम्रो पार्टीको मुल एजेन्डा भनेकै ‘सम्वृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ हो । र विभिन्न किसिमका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु हाम्रा समाप्त भइसकेका छन् । अब एउटा जनताको छोरो राष्ट्रपती र जनताको छोरो प्रधानमन्ंत्री हुने ब्यवस्था आइसकेको छ । त्यसो गर्दा अब देशलाइ कसरी आर्थिक उन्नतीतर्फ लैजाने, कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी उत्पादनमुखी बनाउने, कसरी अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने र कसरी नेपालीहरुलाई विदेश जानबाट रोकेर यहीं आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेनै हाम्रो पार्टीको मुख्य एजेन्डा हो । हाम्रो पार्टीलाइ पूर्व मेचि देखि पश्चिम महाकालीका जनताहरुले चाहानु भएको छ । पुरै ७७ जिल्लामा हाम्रो पार्टी लोकप्रिय छ र एमालेका नेताहरु विकास प्रेमी पनि हुनुहुन्छ ।
एमालेको चुनाव जित्ने ठोस आधारहरु भनिदिनुस् न ?
सिद्धार्थनगरमा चुनाव जित्ने ठोस आधार भनेको यहाँको विकास नै हो । गत ४० वर्षमा नभएको विकास यो ५ वर्षमा भएको छ । र त्यो विकासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । अब यहाँ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अब फेरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका बन्दैछ । लुम्बिनीका कारणले हजारौ हजार पर्यटकहरु आउने जाने क्रम छ । र यो सिद्धार्थनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटिको रुपमा पूर्ण रुपमा विकास गर्न पुर्वाधार, सडक, नाला र उप–महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेर र पर्यटकीय रिéरो८ भित्र राखेर सम्पन्न शहर बनाउनका लागि पनि हाम्रो पार्६ीलाई यहांको जनताहरुले रोज्नूहून्५ जस्तो लाग्५ । यी सब कार०ाले एमालेले चूनाव जीत्नूपर्५ भन्ने मलाइ लाग्५ ।
यहां एक कूशल उद्योगी ब्यवसायी तथा नेता पनि हूनूहून्५ । निर्वाचनलाइ एक ब्यवसायीको आंखाले कून रुपमा हेर्नूभएको ५ ।
यस पार्६ीको नगर कमि६ि सचिव मात्र नभएर म नीजि क्षेत्रको अहिले पनि केन्द्रिय सदस्य हूं । जहिले पनिनिजी क्षेत्रले स्थायी सरकार, स्थायी शान्ती र विकासनै चाहेको हून्५ । जून निजि क्षेत्रले चाहेको आर्थिक उन्नती, आर्थिक सम्वृ४ि त्यो नेकपा एमालेको पनि एजेन्८ा हो । त्यसैले हाम्रो निजि क्षेत्रको एजेन्८ँ नेकपा एमाले संग मिल्न जान्५ । त्यसैले स्थायी सरकार नेकपा एमालेले मात्र दिनसक्५ । शान्तीतथा सम्वृ४ि नेकपा एमालेले मात्र दिन सक्५ । र अहिले बहूमत भन्दा धेरै निजि क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीले एमालेको नीतिलाइ मन पराउनू भएको ५ । त्यसैले यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरुलाइ निजि क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीहरुले पनि मत दिइ विजय गराउने सोच लिनूभएको ५ । र त्यही सोच सि४ार्थनगरको हकमा पनि रहेको ५ ।
अन्त्यमा, सि४ार्थनगर वासीलाइ के भन्न चाहनूहून्५ ?
अन्त्यमा एउ६ँ निजि क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले र एउ६ा पार्६ीको नगर सचिवको हिसाबले र यो क्षेत्रमा एउ६ा सामाजिक अभियन्ताको रुपमा काम गर्ने भएकोले पनि सि४ार्थनगरको विकासमा यदि अवरोध पूर्याउने होइन भने, सि४ार्थनगरको विकास गतिलाइ निरन्तरता दिनेहो भने र एउ६ा अन्तराष्६ि«य सि६िको रुपमा सि४ार्थनगरलाई बनाउने हो भने, यहांको स्थानीय वासीले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी ५ । नेकपा एमालेले अगा८ी सारेका मेयरका उम्मेद्वार ८ा. रामप्रसाद बस्याल र उपमेयरका उम्मेद्वार उमा अधिकारी लगायत एमालेले अगा८ी सारेका वार्८ अध्यक्ष र सदस्हरुलाई मतदान गरि विजयी गराउनको लागि अनूरोध गर्द५ू ।
← यसकारण एमालेले जित्नुपर्छ भैरहवाको चुनाव
रोहिणीमा कृषकहरुलाई आत्मर्निभर बनाउने पहिलो प्राथमिकता →
दशहराः पहिले र अहिले
२०७५ कार्तिक २ gautam buddha sandesh	0
अहिलेका जनता सचेत हुनुहुन्छ
२०७४ मंसिर १५ gautam buddha sandesh	0
नेपालको आर्थिक संबृद्धिका लागि गौ रक्षा
२०७४ चैत्र २१ gautam buddha sandesh	0